Wilfred Ndidi oo beeniyey wararka sheegaya inuu ku biirayo Manchester United – Gool FM
(Leicester) 07 Abriil 2017 – Laacibka qadka dhexe ee kooxda Leicester City Wilfred Ndidi ayaa biyo qabow ku shubay wararka isaga la xiriirinayey inuu u dhaqaaqi doono kooxda Manchester United.
20-sano jirkaan ayaa qaab ciyaareed wacan soo bandhigay soona jiitay indhaha caalamka tan iyo markii uu ku soo biiray naadiga Foxes lagu naanayso bishii Janaayo, markaasoo uu £15m kaga yimid kooxda reer Belgian ee Genk.
Warar hoose oo soo baxay Khamiistii ayaa sheegayay in Ndidi uu ka tegi doono Leicester City haddii Man United ay albaabka u soo garaacdo, waxaana warkan sheegay Hakeem Bello oo isku sheegay inuu yahay wakiilka ciyaaryahankan.
Si walba oo ay ahaato, ciyaaryahan Ndidi ayaa isna hadalkan kaga jawaabay boggiisa Twitter-ka, isagoo yiri: “Fadlan aan idinku war geliyo in warkani uusan sax ahayn, aniga 200% waxaan la jiraa Leicester mana garanayo shaqsigan la magac baxay Hakeem Bello”.
Please be informed this information is not true, I’m 200% with Leicester and i dont know this person called Hakeem bello pic.twitter.com/tafqTJ174b
Ndidi ayaa 10 kulan oo Premier League ah u ciyaaray Liecester City, isagoo u dhaliyey hal gool oo qura.
Kabtanka Man United Wayne Rooney oo seegaya kulanka Sunderland ee Premier League